Deeggarsi 'Lammiin lammiif' eessa gahe? - BBC News Afaan Oromoo
Deeggarsi 'Lammiin lammiif' eessa gahe?
Waayee namoota kuma 800 ol naannoo Somaaleefi daangaa Oromiyaarraa waggaa tokko dura buqqa'anii namoonni maal yaadatu? deeggarsi walitti qabamehoo galma gahee?
''Magaalaa Jigjigaatti dhaladhee guddadhus, lammiin koo Oromoodha'' kan jedhu obbo Ibiraahim, guyyaa tokko wayita gara hojii daldalaa isaatti deemaa jiru sababii Oromoo ta'eef qofa qabamee gara Oromiyaatti ergamuu dubbata.
Obbo Ibiraahim manaafi ijoollee isaa naannoo Somaaleetti dhiisee Fulbaana 2 bara 2009 kan qabanii isa baasan.
Sooma Ramadaanaa fi ayyaana Iidaa ija buqqaatotaatiin
"Otoon buufata konkolaataatti hojii daldalaaf imaluu 'Oromoodha ajjeessaa' jedhanii na qabanii achii gara Oromiyaatti na ergan."
Yeroo buufata konkolaataa keessatti isa qabanittis Oromoota Lagahabuur irraa qabanii konkolaataan guuranii fidan Jigjigaatti harcaasaa akka turan yaadata.
"Daa'ima tokkoo ana biratti reebanii ajjeesani yeroo hundaa hin irraanfadhu," kan jedhu Abiraahim, badii qaqqabeef preezidaantii naannoo Somaalee yeroo sanaa Mohaammad Omar (Abdii Illee) himata.
Dawoo baqannaa Hammarreessaa keessaa akka ture kan dubbatu Obbo Abiraahim, "Adaamaa erga dhufnes koreen deeggarsaa haalaan nu gargaaraniru, hamtuun himannuu hin jiru amma gaarii jirra," jedha.
"Amma mana lammiin nuuf ijaarte keessa jirra, reeshinni kg15 nama tokkoof kennama, Kaartaa mana keenya qabsiifnee maallaqas nuuf liqeessaniiru," jedha.
Dargaggeessi haasofsifne kan biraan, Ahimaddin Gumbul, waggoota 5'f naannoo Somaalee erga jiraatee rakkoo ture baqachuun dawoo Hammarreessaa, achiis gara Baatuutti geeffamuu dubbata.
Magaalaa Baatuutti ji'oota 5 'f deeggaramu himuun, gargaarsi ture addaan cinnaan iddoo jijjiree Yuunversiitii Haramayaatti buna maashiniin danfisee dhiyeessuun akka jiratu haasa'a.
''Baga buqqaanee, har'arra dhaabanne''
Lammileen naannoo Somaalee magaalaa gara garaafi daangaa Oromiyaarraa buqqa'an Oromoon akka dammaquufi akka kannisaatti tokkummaan ka'ee akka waliif birmatu taasiseera jedhan Walitti qabaan Koree Lammilee Oromoo Naannoo Somaaleefi daangaarraa buqqa'anii deebisee dhaabuu kan ta'an Dr. Abarraa Dheeressaa.
Magaalota naannoo Somaalee Itoophiyaa keessaa gara Oromiyaatti kan baqatanii turan lammileen 250,000 karaa naannichi Oromiyaan waliin daangessuurraa namoota 600,000 waliigalatti namoota 867,000 olitu qe'eef qabeenyasaarraa dirqiin buqqa'e jedhu Dr. Abarraa Dheeressaa.
Jaarsaaf ijoollee otoo hin jennee namoota kuma 100'n lakkaa'aman dawoo baqannaa keessa turan, baayee namatti dhaga'ama, jireenya nama jibbisiisa ture, jedhu Dr. Abarraa waan yeroo sana ture yeroo yaadatan.
Haati daa'ima baattee karaa gubbaatti rakkachuullee kan himan Dr. Abarraan, dawoo baqannaa keessattis deessuu, ijoolleeniifi dhukkubsataan walkeessatti ugguramanii dararamuu dubbatan.
"Taateen sun garuu bu'aa nuu buuse, saba Oromoo dammaqse, akka kanniisaatti gamtaan akka waliif birmatuuf kaase."
"Guyyoota 20 oliif na gudeedan, abbaan warraa koo eessa akka jiru hin beeku"
"Waan uffatamuufi nyaatamu qabatanii deeggarsaaf fagoofi dhiyoorraa birmannaatu turee karaan Harargee geessuu sa'aatii 24 banaadha, namatu irra deemaa ture jedhan."
"Buqqa'uun waan gaarii miti, sabni keenya akka wal tumsuu waan gargaareef 'baga buqqaane' har'arra dhaabannee jechuu dandeenya,'' jedhan.
Deeggarsa Nyaata, uffataafi mi'a waligalatti birri biliyoona 8 oli ta'uun deggaramaniiru jedhan.
Isa keessaas maallaqni deeggarsaan sassaabame birriin biliyoona tokkoofi mililiyoona 300 oli ta'usaa ibsaniiru Dr. Abarraan.
Itoophiyaatti deeggarsi amma kanaa guddaa ta'e walitti qabamee hin turre jedhu.
Goodayyaa suuraa Dr. Abarraa Dheeressaa (PHD)
Dr. Abarraan deeggarsa karaa lotorii, konsartii muuziqaa, dorgommii figichaatiin sassabuuf yaadame sababii nageenyi hin turreef lafarra harkifachuufi kaanis haqamuu himan.
Kana malees lotoriin 'lammiin lammiif ' jedhu deeggarsa walitti qabuuf qophaa'e Yeroo shanii oliif abbaa carraa baasuuf karoorfamee akka harkifate dubbatanii, isa osoo hin gurguramiin hafe adda baasuun dhiyeenyatti akka bahuuf jiru himan.
Lotoriin qopha'e keessaa sababii tasgabbiin yeroo sanatti hin turreef kan hin gurguramiin hafe deebi'e sassabamuu isaallee dubbatan.
Komii hanqina gargaarsaa
Buqqaatonni magaalota akka Baatuufi Bishaan Gurraachaa keessa qubsifaman deeggarsa gahaa argachaa akka hin jirre komachaa turaniiru.
Haata'u malee, gargaarsi barbaachisu akka irraa hin cinne ibsaniiru Dr. Abarraa.
Magaalota 11 keessa namoota qubsiifaman keessaa 41,000 ol kan ta'an deeggarsi nyaata, manni jireenyaafi maallaqni kennamaafi akka ture kaasan.
Deeggarsa walitti qabame keessaa harki 30 ol isaaniif kennamee garuu deeggarsi nun qaqqabne jechuun himatanis, fedhasaanii hundaa guutuu hin dandeenye malee deeggarsi irraa hin citne jedhu.
Gurma'aanii akka hojjataniif birri miliyoona 200 fi mililiyoona 64 kennamuufi himan.
"Waan barbaadan hundi hin guutamneef garuu kan bara darbe caala foyyee qabu jedhu."
Namoota sababa gara garaan buqqa'an kanas adda baafachuun gargaarsa barbaachisu dhiyeessuuf mootummaan koree hundeesseeras jedhan.
Koreen deeggarsaa abbootii amantii, Abbaa Gadaa, dureeyyiifi beektota miseensota sagal qabu mootummaa naannoo Oromiyaa ramade tajaajila tolaa kennametti gammachuu qabna jedhu Dr. Abarraan.
Warri magaala qubatan deggarsi akka qaqqabaa ture ibsuun, kanneen baadiyyaa akka Baalee, Boorana, Gujii, Harargee Lixaafi bahaarraa buqqa'an deeggarsi gahaan hin qaqqabiin jiraachuu himan.
"Saantima diimtuun tokko kan kaffalameef hin jiru, hojicha tolaan hojjataa jiru," jedhan Dr. Abarraan.
Lootiriin erga bahee 'odiit' gochuun hojiisaa goolabuuf akka jirus dubbatu.
Wayita buqqa'an namoonni harki 97 naannichatti deebi'uu hin barbaadne ture amma garuu kan qe'eesaanitti debi'anis jiru jedhan.
Mootummaa naannichaa waliin mariyachuun akka deebi'an gochuu kaasuun, ammatti namoonni 200,000 ol daangaarraa buqqa'an qe'eesaanitti deebi'uu Dr. Abarraa ni ibsu.
Bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti namoonni 'rakkoo uumaa turan' jedhaamanii taayitaarraa kaafamuun booda namoonni qe'eesanitti deebi'aniifi deebi'uuf jiranis jiru jedhan.
Fuulduratti buqqa'iinsi akkasii akka hin mudannee mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba jedhan.
Ummanni keenya sabaafi sablammoota daangaarra jiru waliin waliigalee akka jiraatus dhaamaniiru.
Namoota lammiif deeggarsa kennuuf birmatan, karaa garaa garaa hirmaatan Dr. Abarraan galata argadha jedhan.
Walitti bu'iinsa Benishaangul: 'buqqaatonni 75,000 deeggarsa ariifachiisaa barbaadu'
Buqqaatota Gindhir: "Ramadaanni baranaa hedduu nutti ulfaate"
Egereen lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqa'an maal?